Intlanzi yekorale | Ngeentlanzi
EL Intlanzi zekorale, Inzululwazi eyaziwa phantsi kwegama likaHeniochus Acuminatus, inokufumaneka kwiindawo ezahlukeneyo emhlabeni, kodwa ngakumbi kwi-Indian Ocean. Ezi ntlobo zeentlanzi zine-dorsal fin ende enesigcawu esimhlophe esivela embindini womzimba ukuya esiphelweni somsila wazo. Kungenxa yesi sizathu ukuba baziwa njengeflegi ende yeentlanzi. Ukongeza kule hue imhlophe, banamaphiko amthubi akhanyayo abenza ukuba babe mhle ngokupheleleyo emanzini.
Ezi zilwanyana zinobuntu kwaye zinobuhlobo, ke azoyiki ukuhlala nabantu kakhulu kangangokuba kuyasivuyisa ukuzibona njengezinye izilwanyana. Bahlala ngokubanzi kwiibhanki okanye, ukusilela oko, badada kuphela kunye neqabane labo. Kwiimeko ezininzi banokuqubha ecaleni kwezinye iintlanzi, besebenza njenge izicoci zeparasite, kodwa oku kusoloko kusenzeka xa besebancinci kakhulu.
Ukuba ucinga ukuba nezi zilwanyana kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba wazi ukuba ukutya kwazo sisiseko seplankton, nangona ungaziphatha njengeentlanzi ezizezinye kwaye ubanike ukutya okufanayo onokubanika kona, ke ulolongo nokhathalelo ilula kakhulu kwaye ithe ngqo.
Njengoko ziintlanzi ezifumana umntu onamaxesha athile kwi Icandelo lezamanzi olwandle, ziya kuba lula ukuza kwaye zingabizi kakhulu kwixabiso. Ikwayenye yeentandokazi zabasaqalayo xa kuziwa kwi-aquariums kuba kulula ukuyinyamekela kwaye ayifuni ngqwalaselo ininzi. Ukongeza koku, njengoko banxibelelana ngokulula, abanangxaki yokuhlala nezinye iintlanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Intlanzi yeCoral
Ukukhathalela iintlanzi emanzini abandayo ehlotyeni